Ukubuyekezwa kwe-Rekorderlig Hard Cider - Ukudla
I-Rekorderlig Hard Cider Is Obsession Yakho Entsha YaseSweden
Rekorderlig Hard Cider Is Your New Swedish Beverage Obsession
Uma uthathe ingxenye ebaluleke kakhulu mayelana nobhiya (okuqabulayo, okulungele ukuphuza ethini) nokuheha i-cocktail eyenziwe ekhaya (okusha, ukunambitheka kwakho okuthandayo, okufana nobumnandi), ngiyaqiniseka ukuthi umphumela uzoba I-cider eqinile yokuqopha umlando . Kuphela, lezi zinhlayiya eziqinile zaseSweden zinoshukela ophansi, ikhalori eliphansi kanye nenye yama-bevs asemathinini amnandi kakhulu engizame ngawo umzuzu.
Ukuqopha iligi akuyona entsha, kepha intsha ku-US Kuwuphawu lwesiSwidi lwe-cider enzima olwenziwe ngama-apula aseYurophu futhi luyinhlanganisela yezithelo namanzi entwasahlobo, okuholela kwisiphuzo se-premium esiqukethe amaphesenti angama-70 kashukela ongaphansi kunamanye ama-cider brand amaningi . Inesisindo esingama-calories ayi-110 kuphela, futhi, futhi ayinayo i-gluten ngokwemvelo futhi ine-vegan enamaphesenti ama-4.5 ABV. Ngokuyinhloko, kunamabhodlela Maphakathi —Umkhuba waseSweden wokuthola ibhalansi (hhayi kakhulu, hhayi okuncane kakhulu).
Ukudalulwa okugcwele, usuzithande iziphuzo zakho ezimnandi. Ngiyavuma. Futhi ngigibele ngokuphelele ngomkhuba wotshwala obusemathinini, ngakho-ke kimi, ngiqhekeza ngivule ngalinye lama-cider ama-hard cider ka-Rekorderlig bekuyinto nje engiyithandayo ngemuva kwalezi zinsuku. Ikakhulukazi uma ngicabanga ukuthi ngiyagula kancane ngubhiya, angiwathandi ama-vodka seltzer futhi nginqena kakhulu ukwenza ama-cocktails ngokwami ​​manje (kepha -kufanele ukusho ukuthi lo mkhiqizo unikeza iziphakamiso zokubhangqa utshwala kunambitheka ngalunye, ngoba zenzela I-FYI, ngikuzwile kuphela kusanda kuvela ku-aluminium).
indlela yokugqoka i-sarong
Ngokuya kokunambitheka, kunezinhlanganisela ezinhlanu ezigxile kwizithelo. Ngizizame zonke ngabhala phansi imicabango yami kulowo nalowo, ngezansi.
Eyokuqala engiyisampulile yayiyipheya. Umcabango wami wokuqala, bekungukuthi, OZWABA NJENGE PEAR. Kakhulu ukunambitheka kwamapheya amnandi kunokuluma kokukodwa okuthole okusha egatsheni, kepha ngendlela engcono kakhulu, ebonakalayo. Into yesibili engiyiqaphelile kwakuyizinga le-carbonation: Lalithandeka impela. I-fizz eyishumi kweshumi. Kuyabonakala, kungeze into ethile yenjabulo, kepha angishisanga nakancane umphimbo wami lapho ngithatha isiginesha yami ukukhipha okukhulu.
kelly ripa inetha elifanele
2. I-Strawberry Lime
Intandokazi yami. Akubuzwa. Lapho ngivula ithebhu futhi ngiphakamisela ikani ezindebeni zami, ngagcwaliswa ngokushesha ngephunga lama-strawberry avuthiwe. Ngemuva kwalokho, ngakuzwa futhi izinzwa zami zaqinisekiswa. Ukunambitheka kwakukhanya futhi kumnandi kepha kungagulisi kangako, futhi ngacabanga ukuthi kunambitheka njengejusi yemvelo entsha impela. Lagom!
3. Amajikijolo Asendle
Manje, nakhu lapho ngihlangane nomuzwa ongajwayelekile wokulangazelela. Angikwazi ukubeka umunwe wami kulokho ngempela, kodwa kwangikhumbuza okuthile enganginakho ezinsukwini zami zobusha. Lelijusi elingavamile engiliphuze ngisemncane lapho ngivakashela ogogo nomkhulu ePuerto Rico njalo ehlobo? Obunye botshwala engibuminyanise ekolishi (kwanele lapho)? Angiqiniseki, kepha ngithole ukuthi lokhu kuyinambitheke eqine kunayo yonke yeqembu. Hhayi ukunambitheka okubi nakancane (ngenze umyeni wami wakuzama futhi akavumelananga ne-déjà vu yami), kodwa nakanjani ungunombolo wesihlanu kwama-flavour amahlanu engizamile.
ukuzivocavoca ukunciphisa isisu nezinqulu
4. Imango Raspberry
Intandokazi yami yesibili. Mhlawumbe okuqabula kakhulu, kepha hhayi okumnandi kimi njenge-lime sitrobheli. Kwakunomqondo oshisayo ngokwengeziwe kuwo futhi ngangisazisa kakhulu isithelo esiyingqayizivele se-combo. Lokhu kunambitheka kungenze ngafuna ukuyixuba e-cocktail yezithako ezimbili ukubona nje ukuthi yini engayenza nge-jigger of rum.
5. Izithelo Zokukhathazeka
Leli linikeze ukunambitheka okwedlulele ngokwedlulele futhi bekufana ncamashi nojingijolo womango. (Uma uthanda elinye lalawa ma-flavour amabili, cishe uzowajabulela womabili.) Kuphela, lokhu kuhlukahluka bekusinda kancane ekunambithekeni kwami, kepha ukukhetha kwekhwalithi nokho kulabo abathanda isiphuzo esithanda ukunambitheka kwasolwandle ngaphandle ama-calories.
izincwadi wonke umuntu kufanele azifunde eminyakeni engama-20
Kumele ubuke ama-movie wezothando we-hollywood
uhlu lwama-movie amaningi othando